I-china abakhiqizi be-FOB Rapid Test nabaphakeli | I-Liming Bio
IStrongStep®I-FOB Rapid Test Strip (Indle) i-immunoassay ebonakalayo esheshayo yokutholwa kokuqagela okufanelekile kwe-hemoglobin yabantu kuma-fecal specimens womuntu. Leli khithi kuhloswe ngalo ukuthi lisetshenziswe njengosizo ekutholeni izifo ezisezingeni eliphansi emathunjini (gi).
Umdlavuza ocacile ungenye yomdlavuza otholakala kakhulu futhi uyimbangela ehamba phambili yokufa komdlavuza e-United States. Ukuhlolisiswa komdlavuza onemibala mhlawumbe kukhulisa ukutholakala komdlavuza kusenesikhathi, ngakho-ke kunciphisa ukufa.
Ukuhlolwa kwe-FOB kwasekuqaleni okwakuthola ukuthengisa kusebenzise isivivinyo se-guaiac, esidinga ukuvinjelwa okukhethekile kokudla ukunciphisa imiphumela engemihle engamanga neyamanga. I-FOB Rapid Test Strip (Indle) yenzelwe ikakhulukazi ukuthola i-hemoglobin yomuntu kumasampula endle kusetshenziswa izindlela ze-Immunochemical, ezithuthukise ukucaciswa kokutholwa kwamathumbu aphansi. ukuphazamiseka, kufaka phakathi umdlavuza we-colorectal kanye ne-adenomas.
I-FOB Rapid Test Strip (Indle) yenzelwe ukuthola i-hemoglobin yomuntu ngokuhumusha okubonakalayo kokuthuthuka kombala emgqeni wangaphakathi. Ulwelwesi lwalungenamandla okulwa nama-anti-human hemoglobin antibodies esifundeni sokuhlola. Ngesikhathi sokuhlolwa, isampuli livunyelwe ukusabela ngama-anti-human hemoglobin antibodies ama-colloidal gold conjugates, abefakwe kuphini lesampula lohlolo. Inhlanganisela bese ihambisa ulwelwesi ngesenzo se-capillary, bese ihlangana nama-reagents kulwelwesi. Uma ngabe bekukhona i-hemoglobin yomuntu eyanele kuma-specimens, kuzokwakhiwa ibhande elinombala esifundeni sokuhlola se-membrane. Ukuba khona kwaleli bhendi elinemibala kukhombisa umphumela omuhle, kanti ukungabikho kwalo kubonisa umphumela ongemuhle. Ukubukeka kwebhendi enombala esifundeni sokulawula kusebenza njengokulawulwa kwenqubo. Lokhu kukhombisa ukuthi ivolumu efanelekile yesampula ingeziwe futhi ukukhishwa kwe-membrane kwenzeke.
■ Ukusetshenziswa kobuchwepheshe kwe-vitro diagnostic kuphela.
■ Ungayisebenzisi ngemuva kosuku lokuphelelwa isikhathi okuboniswe kwiphakheji. Ungasebenzisi isivivinyo uma isikhwama se-foil sonakele. Ungasebenzisi kabusha izivivinyo.
■ Le khithi inemikhiqizo yezilwane. Ulwazi oluqinisekisiwe ngemvelaphi kanye / noma nesimo sezempilo sezilwane akuqinisekisi ngokuphelele ukungabikho kwama-pathogenic agents. Ngakho-ke, kuyanconywa ukuthi le mikhiqizo iphathwe njengaleyo engatheleleka, futhi iphathwe ngokubheka izindlela zokuphepha ezijwayelekile (isb., Ungangenisi noma uhogele).
■ Gwema ukungcoliswa ngokweqile kwama-specimen ngokusebenzisa isitsha esisha sokuqoqa isampula ngesifanekiso ngasinye esitholiwe.
■ Funda yonke inqubo ngokucophelela ngaphambi kokuhlolwa.
■ Ungadli, ungaphuzi noma ungabhemi kunoma iyiphi indawo lapho kusingathwa khona ama-specimens kanye namakhithi. Phatha zonke izibonelo njengokuthi ziqukethe izinto ezithathelwanayo. Bheka izixwayiso ezibekiwe zokulwa nezingozi ze-microbiological kuyo yonke inqubo bese ulandela izinqubo ezijwayelekile zokulahlwa okufanele kwezinhlobo. Gqoka izingubo zokuzivikela ezifana namajazi elabhorethri, amagilavu ​​alahlwayo nokuvikelwa kwamehlo lapho kuhlolisiswa izibonelo.
■ I-specimen dilution buffer iqukethe i-sodium azide, engaphendula ngepayipi lomthofu noma elethusi ukuze yakhe ama-azide wensimbi angaqhuma. Lapho ulahla i-specimen dilution buffer noma amasampula akhishiwe, hlala njalo ngamanzi amaningi ukuvimbela i-azide buildup.
■ Musa ukushintshana noma uhlanganise ama-reagents avela ezinkampanini ezahlukene.
■ Umswakama nokushisa kungayilimaza imiphumela.
■ Izinto zokuhlola ezisetshenzisiwe kufanele zilahlwe ngokwemithetho yendawo.
Langaphambilini I-Trichomonas vaginalis ne-Candida
Olandelayo: Isixazululo se-Fungal fluorescence staining
Fob Rapid Test Kudivayisi
H. Pylori Ag Ukuhlolwa Okusheshayo Kuthola I-Antigen, IVibrio Cholerae O1 / O139 Ukuhlolwa Okusheshayo Kwe-Antigen Combo, Ikhithi Yokuhlola ye-Igm / Iggrapid, Inoveli Coronavirus Rapid Test Ket, ICoronavirus Yokuhlolwa Kwe-Covid-19, ICoronavirus Antigen Test Kit,